Wasiirka Warfaafinta Somaliland Oo Jawaab Ka Bixiyey Hadal Ka Soo Yeedhay Madaxweynaha Soomaaliya – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Wasiirka Warfaafinta Somaliland Md. Cismaan Saxardiid Cadaani ayaa maanta Isniin ah waxaa uu ka wajaab ka bixiyey hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya oo ku sheegay in Somaliland ay federaalka kaga maqan tahay arimo siyaasadeed.
Wasiir Cadaani ayaa shirkiisan jaraa’id ee maanta ku qabtay magaaladda Hargeysa waxaa kale oo uu kaga hadlay shirweynihii xisbiga WADDANI ee maalinii Sabtida u soo xidhmay xisbigaasi ee lagu doortay musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo halkaasi uu ka hadlay wasiirkii hore ee madaxtooyadda Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga WADDANI.
Wasiir Caddani oo ugu horay waxaa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya waxaanu ugu baaqay in heshiisiiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta. Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland aanay marnaba gorgortan ka galaynin qadiyada gooni isku taag Somaliland.
Wasiirka Cismaan Cadaani ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu maahmaahay “Ninkii tiisa daryeelaa tu kale ku dara”.
Wasiirka Cismaan Saxardiid Cadaani ayaa sidoo kale waxaa sheegay in aanu Wasiirkii hore ee Madaxtooyadda Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan aanu sheegan karin waxqabadka xukuumadda Somaliland ee ay fulisay muddadii shanta sanood ahayd ee ay xukuumadda Somaliland iyo xisbiga KULMIYE taladda dalka hayeen.
Wasiir Cadaani ayaa sidoo kale ka jawaabay hadal uu sheegay inuu ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo sheegay in aan dalka looga baahnay hogaankiisa askari.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee Wasiir Cadaani oo dhamaystiran oo aanu ka soo xiganay Channel-ka Mire Media: